नेपाल आज | कालोबजारी गर्ने कसैलाई पनि छाड्दिन: आपूर्तिमन्त्री (भिडियोसहित)
कालोबजारी गर्ने कसैलाई पनि छाड्दिन: आपूर्तिमन्त्री (भिडियोसहित)
शनिबार, ३१ भदौ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
शिवकुमार मण्डल, आपूर्ति मन्त्री
दशैं नजिकिँदै गर्दा पनि काठमाडौंको मुटु मानिने दरबारमार्गमा अहिले त्यति चहल पहल छैन । भदौ २० गते दरबारमार्गको ब्राण्डेड भनिने केही पसलमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको अनुगमन टोलीले छापा मार्दा दुई हजार चार सय रुपैयाँको जुत्ता २६ हजार रुपैयाँमा बेचेको पत्ता लगाएपछि पसलमा शिलबन्दी लगाइदिँदा अहिले यो निकै चासोको विषय बनेको छ । पहिला पनि अनुगमन नभएका होइनन् । फाट्ट फुट्ट केही साना मिठाइ पसल र मासु पसलमा अनुगमन भएको थियो । तर, दरबारमार्गजस्तो ठाउँको ठूलो माछा मार्न भने कसैले हिम्मत गरेका थिएनन् ।
त्यसदिन अनुगमन टोली पुग्दा पसलेले कर्मचारीलाई पसबाट हटाउन खोजे । ‘यस्ता मन्त्री, प्रधानमन्त्री कति आए कति गए’ यति भनेपछि अनुगमन टोलीका कर्मचारीसँगै पुगेका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल भित्रै पुगे र आफैँ ताला लगाए ।
वास्तवमा उनले जे गरे, जनताका लागि गरेका हुन् । शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषदमा रहेका हालका मन्त्रीहरुले उल्लेख्य केही काम नगरेको आरोप लागिरहेका बेला उनले दरबारमार्गमा जसरी छापा मारे, त्यसको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने वर्तमान सरकारमा उनको उचाइ ह्वात्तै पनि बढेको छ ।
यसै सेरोफेरोमा रहेर उनीसँग नेपाल आजले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सार यस्तो छ ।
दरबारमार्गमै पुगेर अनुगमन गर्ने यो उर्जा कहाँबाट आयो ?
अनुगमन गर्नु मन्त्रालयको कर्तव्य हो । यो पूर्ण रुपमा जनताको आवश्यकतासँग जोडिएको छ । म आफूले पाएको कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्ने मानिस हुँ । यो अस्तव्यस्त शहरमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । जनता खुलेआम ठगिएका छन् । राज्यले कुनै पनि कारवाही अघि बढाउन सकेको छैन । गलत गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा राज्य अघि सर्नुपर्छ । आज जनता खुलेआम ठगिँदा राज्य मुकदर्शक बनेको छ । हामीसँग कानुनी अभाव छ । तर, भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा केही गर्न सकिन्छ भनेर लागें । लत्ता कपडा र खाद्यवस्तु आवश्यक हुन् । यसलाई खरिद गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यही मौकामा धेरै नाफा कमाउने दाउमा रहेकाहरुले समस्या ल्याएको छ । म आफ्नो कार्यकालमा यस्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउन चाहन्छु । स्थायी प्रकारको अनुगमन भइरहनुपर्छ बजारमा । आफूले मूल्य तिर्दा ग्राहक सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ ।
अनुगमन गर्न दरबारबार्ग नै किन रोज्नुभयो ?
अहिलेसम्म त्यहाँ खुलेआम ठगी हुँदा कोही पनि पुग्न सकेका छैनन् । दरबारमार्ग राजधानीको मुटु हो । एक पटक काठमाडौं आएको जो कोही पनि त्यहाँ पुग्छ । तर त्यही ठाउँमा त्यत्रो अनियमितता हुँदा राज्य उदासीन थियो । अरु ठाउँको अनुगमन पनि तिव्र छ । यो अनुगमनको पाटोलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाइनु हुँदैन । मेरो कुर्सीले पाएको अधिकारको म पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाउँछु ।
यहाँले चालेको यो कदमलाई प्रचारबाजीको लागि गरिएको भन्नेहरु पनि छन् नि ?
मलाई पब्लिसिटी स्टन्ट गर्न आवश्यक छैन । आफ्नो कामप्रति म इमान्दार छु । पब्लिसिटी पब्लिक आफैँले गर्ने हो । मैले दरबारमार्गमा नगरेर कुनै मिठाइ पसलमा गएर अनुगमन गरेको भएपनि हिम्मत भएदेखि ठूला पसलमा गर्नु नि भन्ने पनि तिनै साथीहरु हुन् । म अनुगमनका लागि धेरै ठाउँमा गएँ । म आफ्नो ड्युटी गर्न गएको हो । यस्ता अनुगमन गर्ने धेरै आए भनेर हाम्रा कर्मचारीले धेरै कुटाइ पनि खाएका छन् । दरबारमार्गमा म आफैँ गएर सटर लगाएर बन्द गरेँ । म त्यतिबेला नगएको भए सटर लाग्दैनथ्यो । सबै मन्त्रीलाई एउटै डब्बामा राखेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । हामीसँग सिस्टम त छ तर कानुन छैन । प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारवाही हुनैपर्छ ।
नेपालमा खाद्यान्न आयात भएको सूचना किन दिइँदैन ?
यसमा राजस्व विभाग सबैभन्दा ठूलो अपराधी हो । अहिले अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न सातै प्रदेशमा यसको कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी छ । म आफैँ भन्सार विभाग जाँदा पनि मलाई सूचना दिइादैन । रेकर्ड दिन किन समस्या छ ? सूचना दिँदा राजस्व त पक्कै घट्दैन । खाद्य वस्तु कति आयात भयो भन्ने कुरा गोपनियता राख्नु किन ? म आफू मन्त्री भएर अर्को मन्त्रीसँग सूचना माग्दा पनि पाउँदिन ।
मिसावटकोे कुरामा ल्याब टेस्ट गर्न जाँदा नेपाल सरकारको ल्याब टेस्टले देखाउँदैन । हामीसँग ल्याबको अभाव छ । जिरामा काठको धुलो मिसाउँछ, खुर्सानीको धुलोमा इट्टाको धुलो हालिन्छ । स्वास्थ्यमा असर नपर्नेगरी मिसावट भएपछि कसैलाई पत्तो हुने भएन । मिसावट गर्ने यस्ता अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । म यसैका लागि लागिरहेको छु । अनुगमनको पाटोमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने राजस्व विभाग हो । यो भूमिकामा अर्थ र गृह मन्त्रालयको सहयोग चाहिन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोग नभएकै कारण अनुगमनको काम कमजोर भएको छ । राजस्व कार्यालय मुकदर्शक भएको छ ।
आयल निगमको अनियमितताबारे धेरै खबर आइरहन्छ, कहिले कारबाही गर्नुहुन्छ ?
दोषीलाई कुनै पनि हातमा छोड्दिन । अब धेरै दिन कुर्न पर्दैन । म आफ्नो काम पक्कै गर्छु । म कसैलाई बाँकी गर्नेवाला छैन । कानुनी रुपमा मैले सकेको जति सबै गर्छु ।
सार्वजनिक विदामा भन्सार विभाग पनि खुल्ने गर्छ तर नेपाल आयल निगममा केही दिन बिदा हुँदा पेट्रोल पम्प ठप्प किन हुन्छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?
अहिले त्यस्तो छैन । दशै तिहार र छठसम्म कुनै पनि प्रकारको विदा भनेर पेट्रोल पम्प बन्द गर्न पाइदैन भन्ने निर्देशन भइसकेको छ ।
विराटनगरको प्लटिङको कुरामा पनि यहाँको नाम मुछिन्छ नि ?
प्लटिङ गर्ने कुरामा आरोप लगाउन सजिलो छ । राजनीतिमा लाग्नेहरु पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । दोष लगाउन सजिलो छ । व्यवसाय गरेर मेहनत गरेर खान पाउनुपर्छ । यो विषयको म पक्षपाती हो ।